Archive du 28-juil-2021
Depiote Rossy “Alamino aloha ny olana anatin’ny IRD”
Niely tao anatin’ny tambajotran-tserasera omaly ny hafatra avy amin’ny Depiote IRD Rahasimanana Paul Bert na Rossy.
Tena tsy mahazaka firenena !
Sasatry ny mamaha krizy ny Fanjakana ankehitriny. Ny eo tsy miravona, ny eo misosoka ihany! Tamin’ity Fitondrana ity angamba no betsaka indrindra ny toe-javatra mamohehitra na kisampontsampona miseho.
BUS CLASS Hiasa manomboka amin’ny alatsinainy ho avy izao
Amin’ny Alatsinainy 02 Aogositra ho avy izao no hanomboka hiasa ilay "Bus Class" fitateram-bahoaka vaovao hiasa eto an-drenivohitra sy ny manodidina saingy manara-penitra kokoa.
Mananara Ville Nijanona tampoka ny fon’ilay mpanao Gym BACC
Mpiadina iray antsoina hoe : Willy, ao amin’ny sokajy D, hiatrika ny fanadinam-panjakana Bakalorea, mpianatry ny lisea ao Mananara ville no fantatra fa namoy ny ainy omaly
Raharaha famonoana ny Filoha Nosamborina i Sareraka “Méditation”
Nataon’ny polisy sambo-dokotra vao maraina tany an-tranony i Randriazanakolona Yvon na Sareraka mpanakanto fantatra tamin’ilay hira « méditation »
Vaksiny Johnson & Johnson Tonga omaly, tsindrona iray dia milamina
Tonga omaly talata 27 jolay teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenana Ivato ny vaksiny Johnson & Johnson izay tsindrona indray mandeha tsy ilana famerenana miisa 302 750 izay
Raharaham-pirenena Hanambara ny heviny i Alain Ramaroson
Anisan’ny olona andrasan’ny maro, indrindra taorian’ny zava-nisy sy nitranga teto amin’ny firenena Atoa Alain Ramaroson manoloana ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny.
Andohatapenaka Nitsoraka tany anaty rano ilay mpangalatra moto
Lehilahy miisa 04 no saron’ ny Polisin’ny UIR sy ny SUT Tsaralalana ny 25 sy ny 26 jolay lasa teo teny amin’ny lalana Digue Andohatapenaka rehefa avy nangalatra moto.
Lozam-pifamoivoizana Ny 5% monja no avy amin’ny tsy fahalavorarian’ny fiarakodia
Ny 5% monjan’ny lozam-pifamoivoizana miseho eto amintsika no fantatra fa avy amin’ny tsy fahalavorarian’ny fiarakodia.
Jeneraly Ravalomanana “Zandary 11 voatonontonona amin’ilay famonoana Filoha”
Zandary miisa 11 no hanaovana fanadihadiana amin’ilay raharaha momba ny famonoana ny Filoha, araka ny fanambarana nataon’ny Sekreteram-panjakana miadidy
Antaninanandro Tratra ny rain-dahiny amin’ny mpangalatra finday
Lehilahy iray 31 taona no tratra nanendaka teny amin’iny faritra Mascar sy Andravoahangy iny andro vitsy lasa izay. Findain’olona mpandalo no nalainy
Misavoritaka ny Fanjakana Rajoelina Manomboka mifamorika sy mifamono ?
Sahirana ny fitondrana ankehitriny amin’ny famahana olana sy krizy. Mety misy ny sinema politika, fa nisy ihany koa ny toe-javatra tena maneho fa anaty olana lalina ilay Fanjakana,